ब्लूबेरी र बादाम केक | बेजिया
ब्लूबेरी र बादाम केक
मारिया vazquez | 28/11/2021 10:00 | Postres
के यो हामीले अहिलेसम्म पाएको उत्कृष्ट क्रम्ब केकहरू मध्ये एक हो? बेजियामा हामी स्पष्ट छौं कि यो ब्लुबेरी र बादाम केक हो सबै भन्दा राम्रो मध्ये हुन योग्य। यसमा फ्लफी र स्वादिलो ​​क्रम्ब मात्र छैन, तर यसलाई माथि बनाउनको लागि क्रन्ची क्रस्ट पनि छ।
तिम्रो मुखमा पानी आउदैन ? बेजियामा हामीले घरमा नक्कल गर्न नसक्ने कुराले तपाईंको दाँत कहिल्यै लामो बनाउँदैनौं। यो केक स्वादिष्ट हुनुका साथै ए केक बनाउन धेरै सजिलो, जसमा सबै सामग्रीहरू राम्ररी मापन गर्न पर्याप्त छ र जानको लागि कचौरा र हात मिक्सर लिनुहोस्।
यदि यो केकको तयारीमा केहि विशेष छ भने, यो यसको बेकिंग हो। हामी केकलाई ओभनमा लैजाने र ४५-५५ मिनेटमा बिर्सने बानी परेका छौं। तर यहाँ, हामी ओवन दुई पटक खोल्नेछौं। तेसैले? तपाईंले यसलाई चरणबद्ध रूपमा पत्ता लगाउनुहुनेछ।
१150 g कोठाको तापमानमा माखन
2 चम्मच नींबू उत्साह
G 110 g जमिन बदाम
१२० g ब्लूबेरी
ओवनलाई पङ्खाको साथ 180ºC मा तताउनुहोस् र रेखा वा ग्रीस मोल्ड (21 × 11 सेमी।)
खमीर संग पीठो मिलाउनुहोस् र रिजर्भ
ठूलो कटोरामा वा खाना प्रोसेसरमा उच्च गतिमा मक्खन हराउनुहोस् चिनी, लेमन जेस्ट, कागतीको रस र भेनिला एसेन्सको साथ, क्रीम र हल्का मिश्रण प्राप्त नभएसम्म।
पछि एक एक गरी अण्डा थप्नुहोस्, प्रत्येक थप पछि मध्यम गतिमा पिट्नुहोस् र स्प्याटुलाको साथ कन्टेनरको छेउहरू सफा गर्न ध्यान दिनुहोस्।
एकपटक अण्डाहरू एकीकृत भएपछि, खमीर संग पीठो सम्मिलित गर्नुहोस्, पिउने बादाम र नुनलाई लगातार तीनवटा ब्याचमा। यदि तपाइँ चाहानुहुन्छ भने, तपाइँ यी अवयवहरूलाई तीनवटा ब्याचहरूमा थप सहज रूपमा थप्न अघि यी सामग्रीहरू मिश्रण गर्न सक्नुहुन्छ।
समाप्त गर्न ब्लूबेरी को 2/3 थप्नुहोस् र एक spatula संग मिश्रण।
आटा मोल्डमा हाल्नुहोस् जुन तपाईंले तयार गर्नुभयो र ओवनमा लैजानुभयो।
15 मिनेट पछि यो पकाइएको छ, ओवन खोल्नुहोस् र केकको सतहमा बाँकी ब्लुबेरीहरू फैलाउनुहोस्। अर्को 15 मिनेट पछि जसमा सतह खैरो हुनेछ, ओभन खोल्नुहोस् र केकमा एल्युमिनियम पन्नी राख्नुहोस् ताकि सतहले अधिक रङ लिन वा जलोस्।
२० मिनेट बेक गर्नुहोस् र जाँच गर्नुहोस् कि यसलाई ओवनबाट बाहिर निकाल्नको लागि बनाइएको छ।
एक पटक बाहिर, यसलाई 10 मिनेटको लागि चिसो गरौं यसलाई र्याकमा अनमोल्ड गर्न र यसलाई चिसो हुन दिनुहोस्।
गर्मीमा तातो कफी वा आइसक्रिमको स्कूपको साथ ब्लूबेरी र बादाम स्पन्ज केकको मजा लिनुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » व्यंजनहरु » Postres » ब्लूबेरी र बादाम केक
तनाव कसरी व्यवस्थापन गर्ने? मानसिक रूपमा बलियो व्यक्तिहरूले तपाईंलाई बताउँछन्
अनुहारको लागि नरिवल तेल, कसरी सही प्रयोग गर्ने